Onye isi oche Board Tourism Board na-eti mkpu maka njikọta Africa ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi oche Board Tourism Board na-eti mkpu maka njikọta Africa ugbu a
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Africa na emume dị mkpa
N'okwu mmeghe na ngosi ahia ahia Intra-African 2021 nke a na-eme site na Nọvemba 15-21, 2021, na Durban, South Africa, enwere iti mkpu maka ntinye aka iji mee ka ngalaba akụ na ụba njem nlegharị anya rụọ ọrụ n'ụzọ ka mma. Onye isi oche Cuthbert Ncube kwadoro nke a n'ụzọ zuru ezu site n'aka African Tourism Board (ATB).
Oku a kpọrọ bụ ka ndị niile na-etinye aka na-agbakọta ọnụ dịka ngọngọ jikọtara ọnụ.
Ekwuru na oge eruola ka ịmalite inyocha usoro na mmetụta nke ndaghachi azụ nke ọrịa na-efe efe na ịzụlite ụdị mgbake mkpokọta.
Enwere ike ịtụgharị ụdịdị ahụ ka imepụta ihe kwesịrị ịbụ ogidi nke ibelata mmetụta akụ na ụba nke COVID-19.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB), tọrọ ntọala na 2018, bụ njikọ nke mba ụwa kwadoro maka ime ihe dị ka ihe na-eme ka ọrụ mmepe nke njem na njem nlegharị anya na, site na, na n'ime mpaghara Africa. Ọ dịla anya ọ na-akwado igosi Africa dịka ebe njem nlegharị anya jikọtara ọnụ.
Mmetụta nke ọrịa na-efe efe ga-ebuba na 2023 ma eleghị anya site na 2025, mana ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ mpaghara kọntinent na-achọta ụzọ ha ga-esi gbanwee ma mepụta atụmatụ mgbake iji jikwaa ịmalitegharị ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
Ekwesịrị inwe ndụmọdụ siri ike maka gọọmentị ka ha kwenye na usoro nke a ga-eme iji mee ka ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na-enwe nrụgide dị ukwuu ugbu a. Enwere mkpa mberede ka anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ụzọ dị iche iche nke anyị, na-etinye mgbalị iji dozie azụmahịa na ihe mgbochi njem dị ka e kwuru, "Africa na-emeghe maka azụmahịa." Ka ọ dị ugbu a, ọ ka na-arọ nrọ isi n'otu obodo gaa na nke ọzọ.
Ọ dị mkpa ka e leba anya n'okwu ndị bụ isi tupu Afrịka enwee mbọ azụmaahịa Intra-Africa enweghị nkebi. Ngalaba njem nlegharị anya nwere ike bụrụ ngalaba nwere ike itolite na kọntinent na enwere ike ịbawanyewanye ya iji gboo mkpa a. Site na nhazi na ntule dị irè n'ofe mpaghara mpaghara, Africa nwere ike gosipụta onwe ya na njem njem na njem nlegharị anya dịka otu.
Afrịka ga-achụrịrị nnukwu uru mmekọrịta akụ na ụba na ohere uto nke njem nlegharị anya nwere ike ịkwụ ụgwọ ma weta na kọntinent n'ozuzu ya. Echiche dị warara na ịchebe naanị iberibe mba Africa pie site na mba bụ ụzọ dị mkpụmkpụ nke na-efunahụ nnukwu foto. Enwere ọtụtụ ohere enwere ike ijikwa site n'inwe usoro a haziri nke ọma ka a na-akwado ime mgbanwe nke nkwekọrịta mba abụọ iji hụ na mba na-arụkọ ọrụ ọnụ na mmemme azụmahịa na mpaghara njem nlegharị anya n'ozuzu na uto na mgbasawanye dị ka ebumnuche.
HE Nkosazana Zuma, onye bụbu onye isi oche ndị otu mba Afrịka (AU) na onye bụbu minista Chad
Onye bụbu onye isi oche nke AU kwusiri ike na ọ dị mkpa ka kọntinent ahụ malite inwe ekele maka atụmatụ ndị AU kwadoro na mejuputa. Karịsịa, mba ndị otu kwesịrị ịmalite ibipụta paspọtụ AU nke enyere ikike ibugharị na obodo ọ bụla. Enweghị ọchịchọ sitere na mba dị iche iche isonye na-emebi ọganihu na mmejuputa paspọtụ a nke nwere ike imeghe ụzọ maka njem nlegharị anya.
Azụmahịa Intra-African Trade Fair bụ onye Mịnịsta na-achị achị na onye bụbu onye isi oche otu AU bụ Nkosazana Zuma tinyere ndị isi oche bọọdụ njem nlegharị anya sitere na Africa na ndị ukwu ndị ọzọ bịara ya.
Banyere African Tourism Board
Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Africa (ATB) bụ akụkụ nke Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP). Ndị otu ahụ na-enye ndị otu ya nkwado akwadoro, nyocha nwere nghọta, na mmemme ọhụrụ. Na mmekorita ya na ndị otu onwe na nke ọha, Board Tourism Board na-akwalite uto, uru na ịdị mma nke njem na njem nlegharị anya n'Africa. Òtù ahụ na-enye nduzi na ndụmọdụ n'otu n'otu na mkpokọta nye otu ndị otu ya. ATB na-agbasawanye na ohere maka ịzụ ahịa, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, ịdepụta aha, ịkwalite, na ịmepụta niche ahịa. Maka ozi ndị ọzọ, pịa ebe a.